Akụkọ - Tipsfọdụ Ndụmọdụ Banyere WPC
Ngwa osisi plastik (WPC) na-enweta uru nke osisi na ihe polymer, mana ọ bụ n'efu na adịghị ike ha. Ihe WPC dị elu, na-egbochi ire ere, nguzogide ihu igwe, nkwụsịtụ. Enwere ike iji ya mee ihe na mbara ala, ịkọ ugbo, ime obodo. na ikpo okwu ndị ọzọ n'èzí. Site na ọtụtụ ikike dị mma, ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ihe WPC eme ihe iji chọọ ebe ha mma. Ma ị maara ụfọdụ ndụmọdụ nke mmepụta WPC?
1. Somefọdụ ndị ahịa na-achọsi ike ịnata WPC ha ozugbo ha debere iwu.Enwela ezigbo ndidi ezigbo enyi m, ụlọ ọrụ WPC chọrọ oge iji mepụta WPC decking gị. ngwa ngwa, Ọ bụrụ na akụrụngwa na-agbapụ ngwa ngwa, ngwa ọrụ nke WPC ụlọ ga - aka njọ mgbe etolitere ya mana nke ahụ apụtaghị, ọ ga - adị nwayọ nwayọ karịa.
2. Dị ka anyị si mara, anyị WPC ngwaahịa bụ n'ụzọ zuru ezu recyclable na gburugburu ebe obibi.Ya mere, ma eleghị anya, ụfọdụ ndị ahịa ga-echegbu onwe banyere àgwà nke anyị quality.We kwara gị na anyị agaghị eji recyclable material.All nke anyị iji, anyị ga-eji ihe ọhụrụ na anyị ga-anwale ihe mgbe anyị na-azụ ihe. Dị ka nke a, anyị nwere ike ijide n'aka na ezigbo mma nke anyị mejupụtara WPC decking.
3. Nsogbu a na - ahụkarị maka ngwaahịa WPC na - agbacha. Dị ka ihu igwe pụrụ iche, dị ka anwụ dị elu nke na - eme ka ngwaahịa niile dị mfe ịhapụ ụcha ha .Ọ bụrụ na mba gị nwere otu ọnọdụ ahụ, ịkwesịrị ịgwa ụlọ ọrụ anyị. ọzọ UV eguzogide mgbakwunye, ọ ga-eme ka WPC mbadamba ndị ọzọ fading resistance.No agbanyeghị ọnọdụ, ngwaahịa anyị nwere ike na-agba dịkarịa ala 5-10 years.This bụ ezigbo ikike.
Ya mere, olee maka nri gị banyere WPC anyị decking na m kọwaa? Ọ bụrụ na ịnweghị ike ichere ịnweta osisi ị ga-eji wuo plastik, mee ngwa ngwa kpọtụrụ anyị!
Post oge: Jul-06-2021
WPC mejupụtara decking, WPC n'èzí decking, WPC decking n'ala, N'èzí WPC decking, osisi plastic mejupụtara decking, WPC ụlọ,